Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Xayiraadda lacagaha dayuuradaha ayaa halis ku ah soo kabashada warshadaha
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Qiyaastii $ 963 milyan oo ah lacagta dayuuradaha ayaa laga horjoogsaday in dib loogu celiyo ku dhawaad ​​20 dal.
Dawladuhu waxay ka hortagayaan in ku dhawaad ​​1 bilyan oo dollar oo ka mid ah dakhligii diyaaradda in dib loogu celiyo dalkooda.
Diyaaraduhu ma awoodi doonaan inay bixiyaan isku -xirnaan la isku halleyn karo haddii aysan ku tiirsanaan karin dakhliga gudaha.
Waxaa muhiim u ah dhammaan dowladaha inay mudnaanta siiyaan hubinta in lacagaha si hufan loogu soo celin karo dalkooda.
Ururka Gaadiidka Cirka ee Caalamiga ah (IATA) wuxuu ku boorriyay dowladaha inay u hoggaansamaan heshiisyada caalamiga ah iyo waajibaadka heshiiska si ay awood ugu siiyaan shirkadaha diyaaradaha inay dib u soo celiyaan ku dhawaad ​​1 bilyan oo doollar oo laga xannibay iibinta tigidhada, booska xamuulka, iyo hawlo kale.
“Dawladuhu waxay ka hortaagan yihiin in ku dhawaad ​​1 bilyan oo dollar oo ka mid ah dakhliga shirkadaha diyaaradaha in dib loogu celiyo dalkooda. Tani waxay ka hor imaanaysaa heshiisyada caalamiga ah waxayna hoos u dhigi kartaa soo kabashada safarka iyo dalxiiska ee suuqyada ay dhibaatadu saameysey iyadoo warshadaha diyaaradda ay la halgamayaan sidii ay uga soo kaban lahaayeen dhibaatada COVID-19. Diyaaraduhu ma awoodi doonaan inay bixiyaan isku xirnaan la isku halleyn karo haddii aysan ku tiirsanaan karin dakhliga gudaha si ay u taageeraan hawlgallada. Taasi waa sababta ay muhiim ugu tahay dhammaan dowladaha inay mudnaanta siiyaan hubinta in lacagaha si hufan dib loogu soo celiyo dalkooda. Hadda ma aha xilligii la dhalin lahaa 'yool u gaar ah' iyadoo khatar la gelinayo isku xirnaanta hawada ee muhiimka ah, ”ayuu yiri Willie Walsh, IATAAgaasimaha Guud.
Qiyaastii $ 963 milyan oo ah lacagta dayuuradaha ayaa laga horjoogsaday in dib loogu celiyo ku dhawaad ​​20 dal. Afar dal: Bangladesh ($ 146.1 milyan), Lubnaan ($ 175.5 milyan), Nigeria ($ 143.8 milyan), iyo Zimbabwe ($ 142.7 milyan), ayaa ka badan 60% wadarta guud, in kasta oo uu jiro horumar togan oo lagu yareynayo lacagaha xannibmay ee Bangladesh iyo Zimbabwe goor dambe.
“Waxaan ku dhiirigelineynaa dowladaha inay la shaqeeyaan warshadaha si loo xaliyo arrimaha ka hortaagan shirkadaha diyaaradaha inay soo celiyaan lacagaha. Tani waxay awood u siin doontaa duulimaadyada inay bixiyaan isku xirnaanta loo baahan yahay si loo sii wado shaqooyinka loona xoojiyo dhaqaalaha markay ka soo kabanayaan COVID-19, ”ayuu yiri Walsh.